EX - ABSDF: ဟယ်လို !!!
Ko Myoe postedaphoto to MoMo Aung's timeline.
ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ဟိုဘက်က မဟာကြောင်လားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်သွားတဲ့ လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားနဲ့ပါတ်သက်ပြီးဗျူးချင်လို့ပါတဲ့။ ဗျူးချင်ရင် ရွှေတောင်ဗျူး၊ YCDC ဗျူးပါဆိုတာ မရဘူး။ ဒီသူငယ်မ သတင်းထောက်ကလေးက မဟာကြောင့်ပဲ ဗျူးပါရစေရှန့် ဆိုတာနဲ့ ဗျူးခံလိုက်ပါသည်။
Posted by lu bo at 6:04 AM